Freya Mavor Qaawan & Muuqaallada Jinsiga ee Isku-Duwidda - Diiwaanka Filimka Caanka Ah
Freya Mavor Qaawan & Muuqaallada Jinsiga ee Isku-Duwidda
Fiiri atariishada caanka ah ee reer Scotland Freya Mavor oo qaawan iyo muuqaalo galmo ah oo la isku soo aruurinayo, halkaas oo aan ka arki karno xirfadaheeda foosha xun iyo boogaha qaawan, siilka iyo dameerka! Miyaad u sii jeceshahay iyada sidii casaan ama timo cad?
Freya Mavor (Da'deedu tahay 26) waa jilaa isboorti iyo moodeel. Waxay caan ku tahay inay ku ciyaarto Mini McGuinness riwaayada dhallinta ' Maqaarka ’ . Doorkeeda, waxaa loo sharaxay Aktarada ugu fiican abaalmarinta Xulashada TV ee 2012. Mavor wuxuu noqday wajiga Pringle ee Scotland ololaheeda 2011. Waxay sidoo kale ku guuleysatay Abaalmarinta Icon ee Sanadka ee Abaalmarinta Abaalmarinta Iskotishka.
Freya Mavor waxay ka soo muuqatay majaajillada jacaylka ah ee 'Not another Happy Ending', 'Sunshine on Leith', filim qarsoodi ah 'La dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil', 'Ils sont partout', 'Cézanne et moi', ' Boqoradda Cad ',' Dunida Cusub ',' Dareenka Dhammaadka ',' Nolosha Casriga Ah Waa Qashin ', meheradaha' Dilkii ABC ',' The Keeper ', iyo' L'Empereur de Paris '. Mavor ayaa ka soo muuqday shaashadda iyadoo ay weheliyaan xiddigo badan, waxaana ugu caansanaa Jamie Dornan iyo Vincent Cassel.
Booqo mid kale oo ilaahadda Iskotishka ah, atariisho Amanda Hendrick sawiro qaawan oo qarsoon !
Freya Mavor qaawan iyo muuqaalo galmo
'Mar labaad iyo mar labaad'
Halkan waxaa ah muuqaalka ugu horreeya ee Freya Mavor oo qaawan, halkaas oo aan ka arki karno iyada oo sariir jiifa. Waxay lahadleysaa nin iyadoo qaawan, naaso tusaysa naasaheeda sida aan aragno cagaha sariirta marka hore, ka dibna aragti dhow oo wejigeeda u dhow.
Muuqaalka soo socda, Freya Mavor topless wuxuu fadhiyaa sariir nin agtiisa. Naasaheeda ayaa ku jira muuqaalka dhow ka hor inta aysan foorarsan oo ay madaxeeda dul dhigato garabkiisa si ay u seexato. Ma daawan karo marwalba calafkeeda, dick'key wuu qarxi doonaa!
Waana halkan Freya Mavor oo qaawan nin hoostiisa iyadoo sariirta sariir galmo sameyneysa. Waxay muujineysaa qaawan wejiga hore ah, maadaama ay dhabarka u jiifsatay oo ay leedahay bisihiisa iyo duurkeeda. Kadib waxay ku rogmataa dhinacyadeeda oo ay muujisaa dameer, iyada oo daawaneysa ninkeeda oo sigaar cabaya.
Muuqaalka soo socda wuxuu muujinayaa Freya Mavor oo qaawan, iyadoo dharka iska siibaysa. Waxay fuulaysaa sariirta iyadoo qaawan, iyadoo tusaysa dameerkeeda qaawan, ka dibna buubbadeeda markay leexato.
Fiiri atariishada casaanka ah ee cusub Freya Mavor muuqaalka qaawan ee 'L'Empereur de Paris'. Waxaad arkeysaa iyada oo sariirta jiifta, dhabarka u jeedisay askari ilaalinaya jirkeeda qaawan! Waxaan arki karnaa Freya ibta casiirkeeda macaan iyo boogaha yar yar!
'Marwadii Gaadhiga Ku Xidhnayd Muraayado iyo Qoryo'
Muuqaalkan, Freya Mavor waxaa lagu arkay iyadoo la socota nin ku sugan hoolka. Shaatigeedu wuu furmaa si uu u soo bandhigo rajabeetadeeda. Waxaan markaa aragnaa iyada oo dharka la dhigaysa wiilka qolka jiifka oo aan dhabarka saarin. Waxaan ka aragnaa iyada oo qaawan oo dhinaca ah sida ninku u leefleefo Freya Mavor. Ninka ayaa markaa kor u kacaya oo ay u galmoonayaan, marka hore Freya oo dhabarka saaran ka dibna ku seexanaysa caloosheeda.
Halkan waxaa ah Freya oo muujineysa boobkeeda dhinaca si kooban, markii ay soo jeesatay oo ay ku duudduubtay maro qaar.
Fiiri Freya Mavor oo nin la sameysaneysa ka dibna muujineysa boogaha qaawan. Waxay ku jirtaa goob galmo iyada iyo ninkeeda waxayna sariirta jiiftaa waxaanan arkeynaa wiilka dusheeda.
Waana tan isku soo aruurinta Freya Mavor qaawan iyo muuqaalada galmada ee lagu soo duubay fiidiyow! Ku raaxeyso dadweynow!
duufaanka Toni darroor qaawan
sawiro qaawan oo ah at & t gabar
Jenner Kendall xiisaha galmada
Emma dhabta Watson qaawan